‘शिल्पाको कानको जाली फुटेको भए करिश्माजीको पार्टीमा किन जानु भयो ?’ : छविराज ओझा « Ramailo छ
‘शिल्पाको कानको जाली फुटेको भए करिश्माजीको पार्टीमा किन जानु भयो ?’ : छविराज ओझा
चौथो श्रीमती शिल्पा पोखरेलसँगको विवादको विषयमा निर्माता छविराज ओझोले मुख खोलेका छन् । निर्माता ओझोले बुधबार राती केही अनलाइनसँग आफ्नो कुरा राखेका छन् ।
नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा निर्माता ओझा भन्छन्, ‘जे जसरी खबरहरु आइरहेका छन्, त्यसको वस्तुपरकता हेर्दा हुन्छ । मेरो कुनै गल्ती छैन । घरपरिवारमा डिसकस भएको हो, त्यसपछि शिल्पाजी स्कुटी लिएर बाहिर जानु भयो । दाजु–भाउजुकोमा गएको थाहा पाएँ । तर एकाएक जे जसरी प्रहरीमा उजुरीको कुरा आयो, त्यसले मलाई आश्चर्यमा पारेको छ ।’ उनी थप्छन्, ‘दुई हप्ताअघि मैंले पिटेर जाली फुटेको व्यक्ति यो बीचमा विभिन्न कार्यक्रममा उपस्थित हुन कसरी सक्छ ? त्यसैले यो सरासर झुठा आरोप हो । प्रहरीकोमा पुग्ने विषय नै थिएन । तर यो बीचमा शिल्पाजीलाई कसले के भनेर उक्सायो, त्यो मलाई थाहा भएन । शिल्पाले उजुरी हालेपछि हिजो एकपटक आफू प्रहरीकोमा पुगेर छलफलका लागि प्रयास भएको हो । आज म विरामी भएँ ।’
‘मैले उहाँका लागि सबै प्रकारका सहयोग र सम्बन्धको भूमिका निर्वाह गर्दागर्दै पनि जुन अवस्था आयो यो दुःखद छ’, उनले भने, ‘दुई हप्तादेखि उहाँ दाजु भाउजुकोमा हुनुहुन्छ । बाँकी कुरा मैले बुझेर मात्र भन्न सक्छु ।’
यस्तै अनलाइन खबर डटकमसँगको कुराकानी शिल्पासँग भएको विवाद बारे छवि यसरी वेलिविस्तार लगाउँछन्, ‘दिउँसो उनी स्कुटर लिएर निस्किइन् । बेलुका पाँच बजे विकास रौनियार (शिल्पाको बनाएको दाइ) र सम्झना उप्रेती रौनियार (विकासकी पत्नी) आए र उनको लुगा फाटो लिएर गए ।’ आफूहरुको सम्वन्ध बिगार्न सम्झना र विकासले भूमिका खेलेको उनको दाबी छ । पिटेर कानको जाली फुटेको विषयमा प्रश्न गर्दा छविले ठाडै अस्वीकार गरे । ‘यदि मंैले त्यसरी पिटेको भए तुरुन्तै प्रहरीमा जानुहुन्थ्यो होला । १५ दिनसम्म किन जानुभएन ?’ उनले भने, ‘यो बीचमा उहाँ विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिनुभएको छ । करिश्माजीको पार्टीमा जानुभएको थियो । स्टारमलमा दिनभरी बस्नुहुन्छ । मैंले थला पर्ने गरी पिटेको भए कसैलाई त भन्नुहुन्थ्यो होला ।’
निर्देशक सम्झना उप्रेती रौनियारले पनि यस विषयमा आफ्नो भनाई राखेकी छन् । उनले भनिन्, ‘उहाँले घाँटी न्याक्नुका साथै कानको जाली फुट्ने गरी पिट्नु भएछ । हामीले कन्यादान दिएर पठाएकी बहिनी गुहार माग्दै आएपछि हामीले संरक्षण नदिने कुरा आउँदैन ।’ छविको घर छोडेर आएपछि शिल्पा आफूहरुसँगै रहेको उनले बताइन् । तर, प्रहरीमा उजुरीका लागि आफूहरुले नउक्साएको सम्झनाको भनाइ छ । ‘प्रहरीमा जाने उनको निर्णय हो, हामीले यसमा कुनै भूमिका खेलेका छैनौं,’ उनले भनिन् ।
चौथो श्रीमतीसँग पनि किन सम्बन्ध सुमधुर नहुनुमा कतै छविकै कमजोरी त होइन ? भन्ने प्रश्नमा छविले भनेका छन्, ‘उहाँलाई मेरो सबै पृष्ठभूमि थाहा थियो । थाहा भएरै मसित सम्बन्ध गाँस्न आउनुभएको हो । उहाँलाई मैंले नै फिल्म उद्योगमा स्थापित गराएँ । तर उहाँले नै मलाई आज जीवनमा पहिलोपटक प्रहरी कार्यालय धाउन वाध्य बनाउनुभयो ।’
‘चिनी कम रंग कडा’का तीन कलाकार (भिडियो-फोटो)
गुन्द्रीमा पिरती साट्दै सरोज र आश्मा
‘भुवन केसीको दोष छैन’ : शोभित बस्नेत (भिडियो)
दिपाश्री निरौलालाई क्षमा दिन राजेश हमालको आग्रह
‘मेरो लागि महानायक राजेश हमाल’ : पल शाह (फोटो/भिडियो)